Tartankan ayaa waxaa ka qeyb qaatay lix koodood oo ay maal gelinayeen shirkado iyo hoteelo k u yaala magaalada Muqdisho sida ku muuqata sawirka boga hore ee webka.
Qeybtii hore ee cayaarta oo ahayad mid aad u adag ayaa kusoo idlaatay 0-0, hase ahaatee daqiiqadihii hore ee qeybta labaad ayaa Maxamed Cabdul qaadir Shariif uu goolka guusha u saxiixay kooxdiisa Liido Sea Food waxaana uu goolkaasi dhashay daqiiqadii 49-aad ee qeybta dambe.
Inkastoo ay wiilasha Singjet ku guul dareysteen isku daygoodii ay ku doonayeen in ay goolka iskasoo gudaan, hadana waxaa ay sameeyeen cayaar wanaag aad loola dhacay iyadoo midkoodna aan loo taagin calaamad ganaax ah 90-kii daqiiqadood ee cayaartu socotay.
Dhowr jeer oo ay weerar ku qaadeen goosha kasoo horjeeda ayaanay ku guuleysan isku daygoodu in uu mira dhalo, balse cayaar wanaag ayaa lagu amaanay shalay.
Xoghayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdi Qani Saciid Carab oo saxaafada kula hadlay garoonka ayaa sheegay in tartanku uu kusoo dhamaaday si guul ah xiriirkuna uu ka gaaray ujeedooyinkii laga lahaa, isagoo xusay in tartankani uu xambaarsanaa 3 muhiimadood oo waaweyn.
Xoghayaha guud waxaa uu ka dhawaajiyay in xiriirku uu todobaadka dambe qaban doono munaasabad weyn oo koobka lagu guddoonsiinayo kooxda Liido Sea Food iyadoo sidoo kalana munaasabadaasi lagu bixin doono abaal marino kala duwan.
Intii ay socotay cayaartii shalay waxaa qaar ka mida ciyaartoyda kooxda Liido Sea Food la siiyay ganaaxyada hoos ku cad.
LIIDO SEA FOOD
Mohamed Abdulkader Farah
Abdikarim Abdulle Mohamed
Qasim Ali Mursal
Hamza Mohamed Muqtar